Ma Dhabbaa In Modric Mar Kale Dhaawacmay?
HomeWararka MaantaMa Dhabbaa In Modric Mar Kale Dhaawacmay?
Luka Modric ayaa garoonka ka baxay markii ay dhamaatay ciyaar Arbacadii dhex martay Real Madrid iyo Rayo Vallecano isagoo dareemaya xanuun muruqa lugta bidixda ah, waxaana shaashadaha laga arkayay isagoo gacantiisa isku xejinaya xanuun darteed, isla markaana si fiican aan u socon karaynin.
Inkasta oo ciyaarta uu dhamaystay, haddana waxa soo baxaya shaki tibaaxaya in uu laacibkani maqnaan doono kulamo muhiim u ah kooxdiisa, kuwaas oo ay ku jiraan kulanka Champions League ee ay Salaasada toddobaadka dambe la ciyaari doonto Real Madrid kooxda ay isku magaalada yihiin ee Atletico Madrid.
Warkan ayaa haddii uu run noqdo waxa uu dhaawac weyn ku noqonayaa qaab-ciyaareedka yabyabka ah ee ay Real Madrid isku hagaajisay kulamadii u dambeeyey, hase yeeshee tababare Carlo Ancelotti ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in Modric aanu wax dhibaato ah dareemaynin.
“wax dhibaato ah ma qabo Modric. Qaar ka mid ah ciyaartooyada ayaa daallanaa dhamaadkii ciyaarta.” Ayuu yidhi Ancelotti.
Paderborn vs Bayern Munich (0-6) – All Goals & Highlights 06/02/2018 HD
Lionel Messi Oo Cristiano Ronaldo Ugu Hambalyay Bogga Facebook-ga
15/01/2015 Khadar Dirir
Shirkadda NIKE Oo Soo Saartay Kabo Ay Ku Xusayso Guusha Cristiano Ronaldo Ee Ballon d’Or